Fri, May 29, 2020 at 12:33am
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सद्वारा २० प्रतिशत बोनस र हकप्रद प्रस्ताव पारित
काठमाडौं, ३० कात्तिक। सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको १६ औं बार्षिक साधारण सभाले २० प्रतिशत वोनस सेयर र त्यसपछि कायम हुन आउने चुक्तापूँजीको ३५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभामा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष ताराचन्द्र केडियाले कम्पनीको कारोवार एवं वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरे । कम्पनीले आ.व. २०७३÷७४ मा विभिन्न बीमा व्यवसाय अन्तर्गत रु. १ अर्व ५० करोड..
धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकले एकापसमा सूचना आदान प्रदान गर्दै
काठमाडौं,२४ कात्तिक । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकले एकआपसमा सुचना आदान प्रदान गर्ने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा हुने बैंकिङ कसूर लगायतका गलत कार्य तथा धितोपत्रको भित्री कारोवार लगायत अन्य विविध कसूरका कारण हुनसक्ने वित्तीय दुर्घटना रोक्न समेत यो सम्झौताले सहयोग पुग्ने विश्वास बोर्डले लिएको छ । धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार नियामक निकायहरुको अन्तराष्ट्रिय संस्था आइओएससीओको साधारण सदस्य हुन अनुसन्धान लगायतका..
धितोपत्र बोर्डको ‘ग्रीन सिग्नल’, शेयर ब्रोकरले मार्जिन कारोबार गर्न पाउने
काठमाडौं, २१ कार्तिक । नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर (ब्रोकर) व्यवसायीहरुलाई मार्जिन कारोबार गर्नका लागि बाटो खोलिदिएको छ । बोर्डले ‘मार्जिन कारोवार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०७४’ जारी गर्दै शेयर ब्रोकरहरुको लामो समयदेखिको अनुरोधको सुनुवाई गरेको हो । यसअघि ब्रोकरहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अनुरुपको धितोपत्र बोर्डमा मार्जिन कारोबार गर्न पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए । हालै जारी यस नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनको लागि..
युनिलिभरका सेयरधनीलाई तिहारअघि नै लाभांश, प्रति सेयर १,२७० रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपालमा २५ वर्ष अघि स्थापित युनिलिभरले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई तिहारअघि नै लाभांश उपलब्ध गराउने भएको छ । कम्पनीको २४ औं बार्षिक साधारणसभाले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट प्रति सेयर १ हजार २ सय ७० रुपैयाँका दरले नगद लाभांस दिने निधो गरेको हो । कम्पनीले बिगतका वर्षहरुको तुलनामा यसबर्ष सबैभन्दा उच्च लाभांश वितरण गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले कुल ९६..
दशै बिदापछि खुलेकै पहिलो दिन शेयर बजार बढ्यो, ६.८९ अंकको बृद्धि
काठमाडौं । दशैंको लामो बिदापछि पहिलो दिन मंगलबार खुलेको शेयर बजारमा बृद्धि देखिएको छ । मंगलबार नेप्सेमा ६.८९ अंकको बृद्धिका साथमा अधिकांश परिसूचकहरु हरिया भएर बन्द भएका छन् । चाड अझै नसकिएकाले मंगलबार १४ करोड रुपैयाँको मात्रै कारोबार भयो । त्यस्तै सेन्सेटिभतर्फ भने १.७२ अंकले बढेर ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । यस दिन जम्मा दुई लाख..
सनराइज बैंकको ७ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । सनराइज बैंकले हकप्रदमा वितरण हुन नसकेको सर्वसाधारण एवम् संस्थापक समूह गरी जम्मा ७ लाख १० हजार ७ सय ४३ कित्ता शेयर लिलामीमा आएको छ । उक्त लिलामीको शेयरमा गत असोज ८ देखि आगामी २२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ । शेयर लिन इच्छुकले बिक्री प्रवन्धक सनराइज क्यापिटलमा प्रतिकित्ता न्यूनतम १०० रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी मूल्य अंकित गरि आवेदन दिनुपर्ने बैंकले जनाएको..
सानिमा बैंकको १३ औ बार्षिक साधारणसभा असोज २९ गते
काठमाडौं । सानिमा बैंकले आगामी असोज २९ गतेका लागि १३ औ बार्षिक साधारण सभाको दिन तोकेको छ । साधारणसभामा बैंकले गत बर्ष गरेको आम्दानीबाट आफ्ना शेयरधनीलाई १६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने बताइएको छ । सानिमाले गत आर्थिकवर्षमा एक अर्ब ३० करोड एक लाख ५८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाइ गरी प्रतिसेयर आम्दानी १८ रुपैयाँ ८५ पैसा कायम गरेको थियो । बैंकको चुक्ता..
‘अब उत्पादनशील क्षेत्रलाई शेयर बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गरिने’
काठमाडौं । आगामी दिनहरुमा उत्पादनशील क्षेत्रलाई शेयर बजारमा प्रवेश गराउन प्रोत्साहन गरिने भएको छ । स्टक ब्रोकरहरुसँगको भेटमा अर्थ राज्यमन्त्री उदय शम्सेर राणाले हालै यस्तो बताएका हुन् । सो अवसरमा मन्त्री राणाले लगानीकर्ताको जोखिम व्यवस्थापनका लागि रियल सेक्टरलाई शेयर बजारमा प्रवेश गराउनु अपरिहार्य रहेको समेत औंल्याए । स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधिहरुसँगकोे भेटमा बोल्दै राज्यमन्त्री राणाले बजारमा बास्तविक क्षेत्रको प्रवेशपछि मात्रै..
बरुण हाईड्रोको एजिएम असोज २७ गते, १००% हकप्रद र ५% बोनस दिने
काठमाडौं । बरुण हाईड्रोपावर कम्पनीले आगामी असोज २७ गते तेह्रौं तथा चौधौ बार्षिक साधारणसभा बोलाउने निधो गरेको छ । सो दिन बस्ने साधारणसभाले यसअघि कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको पाँच प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव समेत पारित गर्ने जनाएको छ । साथै, सोही साधारणसभाले यसभन्दा अगाडिको बिशेष साधारणसभाबाट पारित एक बराबर एक अर्थात शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने निर्णयलाई समेत अनुमोदन गर्ने कम्पनीले जनाएको..
शेयर बजारमा फेरी ‘बुलिश ट्रेन्ड’
काठमाडौँ । गत साताको बिहीबारदेखि सुध्रिएको शेयर बजारले आइतबार पनि निरन्तरता पायो । आइतबार पनि शेयर बजारमा दोहोरो अंकको सुधार देखिएको हो । साताको पहिलो दिन शेयर बजार मापक सूचकले १७.६३ अंकले बढेर १५४७.९४ अंक छोएको हो । आइताबार १ सय ५९ कम्पनीका १६ लाख ५४ हजार कित्ता शेयर ७७ करोड ८० लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो । त्यस दिन सबैभन्दा..
घट्दो सेयर बजारमा लगानीकर्ता हरुलाई प्रवेश गर्ने सु-अवसर
काठमाडौं । यो साता सेयरबजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा उच्च गिरावट आएको छ । कारोबारमा आएका अन्य बाहेकका सबै समूहको परिसूचक घटेपछि बजारमा उच्च गिरावट आएको हो । पाँच महिनापछि शेयर बजार मापक सूचक फेरि १४ सयको लाइनमा झर्न पुग्यो । साताको पहिलो दिन देखिनै घट्न थालेको बजारले बुधबार पनि निरन्तरता पायो । साताको चौथो दिन नेप्से परिसूचक ९ अंकले घटेर..
यसपटक ग्लोबल आइएमईको २० प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष १६ प्रतिशत लाभांश दिएको ग्लोबल आइएमई बैंकले यसवर्ष आफ्ना शेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । बुधबार बसेको बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले १० प्रतिशत बोनस शेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने अन्तिम निर्णय गर्दै त्यसको घोषणा गरेको हो । ग्लोबलको हाल चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने बैंकले गत आर्थिक वर्षमा दुई..
यो वर्ष निर्धन उत्थानको ८०% लाभांश
काठमाडौँ । यो वर्ष निर्धन उत्थान बैंकले नगद तथा शेयर लाभांश सहित ८० प्रतिशत बोनस जारी गर्ने भएको छ । बैंकले गत बर्ष लघुवित्त संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै मुनाफा कमाएको थियो । बैंकले गत असार मसान्तसम्म कायम भएको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँको आधारमा ६६.६७ प्रतिशत बोनस शेयर दिने जनाएको हो । ययसँगै बैंकको चुक्ता पूँजी एक अर्ब पुग्ने बताइएको छ । बैंकले..
नेपाल बंगलादेश बैंकको १२ प्रतिशत बोनस शेयर
काठमाडौँ । नेपाल बंगलादेश बैंकले आफ्ना शेयरधनीलाई १२ प्रतिशत बोनस शेयर दिने घोषणा गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट १२ प्रतिशत बोनस शेयर र लाभांश कर प्रयोजनका समेतका लागि ३.७९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने जनाएको हो । बैंकले यो वर्ष दिन लागेको लाभांश गतवर्षको भन्दा करिब ५० प्रतिशतले कम हो । बैंकले गत वर्ष ३३.६८ प्रतिशत लाभांश दिनुका साथै ८०..
नेप्सेको ‘सिइओ’ बन्ने दौडमा अन्तिम ५ जना
काठमाडौं । सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेप्सेको खाली रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थात ‘सिइओ’ पदका लागि ५ जनाको नाम छनौट गरेको छ । रिक्त रहेको पदका लागि आवेदन परेकाहरु मध्येवाट शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायीक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण तथा अन्र्तवार्ताका लागि अन्तिम ५ जनाको नाम छनोट गरेको हो । यसअघि मन्त्रालयले शैक्षिक योग्यता र व्यवसायीक कार्ययोजना सहित आवश्यक आवेदन पेश गर्न सार्वजनिकरुपमा आब्हान गरेको थियो..
एनसीसी र सनराइजबीच सेयर निष्कासन सम्झौता
काठमाडौं, भाद्र २३ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक, एनसीसीले आफ्ना सेयरधनीहरूका लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नका लागि सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । एनसीसीले २ कित्ता सेयर बराबर १ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न सनराईजसँग सम्झौता गरेको हो । सो अवसरमा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल र सनराइज क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा..
अब शेयर धितोबाट पनि कर्जा पाइन थाल्यो
काठमाडौ । शेयरमा लगानी गर्ने मन त निकै छ तर अब के गर्ने ? हो यदि तपाईंसँग यदि कुनै कम्पनीको शेयर छ भने अब धन्दा मान्नु पर्नेछैन । किनकी, अब थुपै बैंकहरुले शेयरलाई धितोमा राखेर त्यसबापत कर्जा दिन सुरु गरिसकेका छन् । अझ यसमा खुशीको कुरा त के छ भने कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु त शेयर कर्जा लिन आग्रह गर्दै ब्याजदर..
एनसीसी बैंकले तत्कालै पचास प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक, एनसीसीले चुक्ता पूँजी पुर्याउन तत्कालै पचास प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने भएको छ । बैंकको गत साता बसेको १९औं वार्षिक साधारणसभाले पचास प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले तोकेको ८ अर्ब चुक्ता पूँजी अहिलेसम्म यो बैंकको पुगेको छैन । साथै, उक्त साधारणसभाले बैंक र अरु चार वटा विकास..
सिद्धार्थ इक्विटी फण्डले पायो इकाई निष्कासनको अनुमति
काठमाडौँ । सिद्धार्थ इक्विटी फण्डले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इकाई निष्कासनको अनुमति पाएको छ । यससँगै चालु आर्थिक वर्षमा सामुहिक लगानी कोष निष्कासनको अनुमति पाउने सिद्धार्थ पहिलो भएको हो । कोषले १० रुपैयाँ अंकितका एक अर्ब २० करोड मूल्य बराबर १२ करोड इकाई निष्कासनको अनुमति पाएको हो । सिद्धार्थ क्यापिटलको यो तेस्रो सामुहिक योजना हो भने यसअघि सिद्धार्थ क्यापिटलले दुईवटा योजना बजारमा ल्याइसकेको..
Results 589: You are at page 20 of 20